SIDEE loo abuuraa SHAQOOYINKA FANKA ee CAQLIGA FARSAMADA. (Si fudud)
Inicio/Sirdhaad dabiici ah/Sida loo abuuro shaqooyinka farshaxanka leh Sirdoonka Artificial
Sida loo abuuro shaqooyinka farshaxanka leh Sirdoonka Artificial
0 3.536 2 daqiiqo akhri
Waxaad hadda ku abuuri kartaa farshaxanka Sirdoonka Farshaxanka
Waxaan soo gaarnay taariikhda oo xitaa tayada ugu badan ee aadanaha, sida hal abuurka ama abuurista shaqooyinka farshaxanka, ay bilaabayaan inay carqaladeeyaan ama su aalo laga waydiiyo AI.
In kasta oo ay run tahay in xilligan AI aanu awood u lahayn inuu gudbiyo isla tayada ama nuxurka ay gacanta ama dhegaha aadamuhu ku gaari karto xagga rinjiyeynta ama muusigga. Sidoo kale waa in maskaxda lagu hayaa in tani ay wali ficil ahaan tahay bilowgeeda, laakiin tani waxay ka careysiineysaa aasaaska hal abuurka.
Ayaa garanaya haddii naqshadaha xiga ama looxyada qurxinta ay sameyn doonaan AI mustaqbalka?
Way cadahay in shaqada abuureha uu noqon doono waqtiyo aan xad lahayn oo ka jaban, sidaa darteed waxay fureysaa mamnuuc aad u weyn oo suurtagal ah oo ku saabsan goob kasta oo ku dhow.
Barnaamijka Sirdoonka Artifishalku wuxuu awood u leeyahay inuu falanqeeyo kumanaan natiijooyin ah muddo yar gudahood, isagoo ka qaadanaya qodobbo xiisa leh kuwan isla markaana abuuraya adeegsiga tusaalooyinkaas oo isugu keenaya kun habab oo kala duwan.
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira bog aan ku arki karno gacanteena koowaad, waa sirdoon farsamo gacmeed loogu talagalay tan, abuur farshaxanno farshaxan leh Sirdoonka Cilmiga ah. Kaliya kumanaan ilbidhiqsi, AI-kan ayaa gelin kara xoogaa rinjiyeyaal aan la taaban karin oo hubin kara, waa run in rinjiyeynta aan laga sameyn doonin shucuur, ama aan la yeelan doonin ujeedo sida waxa farshaxan ee runta ahi ku siin karo, xitaa Hagaag, tani waa wax cabsi badan.
Websaydhku wuxuu diyaariyey koodh loogu talagalay dhammaan noocyada sawirrada, oo ay ku jiraan abuurista dadka isticmaalaya caqliga macmalka ah, hore ayaan uga hadalnay tan qodobkan:
Sida loo abuuro dadka leh Sirdoonka Artificial
Barnaamijka noocan ah waxaa loo isticmaali karaa si fiican qaabeynta dharka, hilqado, anime ama jilayaal ciyaarta fiidiyowga, qaabeynta qalabka guryaha iwm.
Maqaalkan waxaan ku guda galaynaa farshaxanka, waxaan hubaa inaad ku yeelan lahayd qaar ka mid ah sawirradan gurigaaga.
Waa kuwan qaar ka mid ah tusaalooyinka laga soo qaatay degelkan.
Sawir uu qoray Thisartworkdoesnotexist
Waxaa abuuray Thisartworkdoesnotexist
Sawir uu sameeyay Thisartworkdoesnotexist
Farshaxanimada waxaa sameeyay Thisartworkdoesnotexist
Sidaad u aragto, waa farshaxan aan la taaban karin, laakiin waxay kicisaa xiisaha badan ee natiijooyinka. Haddii aad rabto inaad sameyso imtixaanka naftaada, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad hesho thisartworkdoesnotexist. Mar kasta oo aad dib u cusbooneysiiso bogga, shaqo cusub ayaa u muuqan doonta mid diyaar u ah inay ku qanciso. Taasi waa sida ay u fududahay in lagu abuuro shaqooyin farshaxan leh Sirdoonka Cilmiga ah.
Sawir gacmeedka lagu sameeyay AI waxaa lagu iibiyay 383.000 XNUMX
Edmond de Belamy waa rinjiyeyn lagu xardhay barnaamij sirdoon macmal ah, qiimaha lagu iibiyay ayaa ah 383.000 EUR. Sawir gacmeedkani wuxuu ku dayanayaa sawir nin gob ah oo ka soo jeeda qarnigii XNUMXaad. Waxaa abuuray koox faransiis ah oo la yiraahdo 'iska cad', oo ka kooban Pierre Fautrel, farshaxan, saynisyahan kumbuyuutar ah oo la yiraahdo Hugo Caselles-Dupré iyo dhaqaaleyahan. Gauthier Vernier.
Waxaa jira shaqooyin badan oo farshaxanno badan oo lagu abuuray caqli macmal ah, laakiin kama hadli doonno iyaga qodobkan.
Ugu dambayn, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado aragtidaada.
Miyaad u maleyneysaa inay run ahaantii suurtagal tahay in mustaqbalka Sirdoonka Artifishalka ah uu baddali doono gacanta aadanaha ee Fanka?
farshaxan leh AI farshaxan ku abuur AI ia waxay abuurtaa farshaxan ia waxay u abuureysaa farshaxan 380.000 euro farshaxanka sirdoonka macmalka ah caqliga macmalka ah wuxuu abuuraa farshaxanka barnaamijka farshaxanka thisartworkdoesnotexist shabakadda farshaxanka oo leh ai
Goobaha ugu fiican ee laga soo dejisan karo khariidadaha HDRI ee bilaashka ah
Sidee hackkasbashada astaanta Facebook (iyo sida looga fogaado)
Waxay horumariyaan hab cusub oo ah ilaalinta nibiriga
5 Been Oo Ku Saabsan Sirdoonka Artifishalka
Cilmiga macmalka ah ayaa saadaalin kara goorta qofku dhiman karo
Sirdoonka macmalka ah si loo ogaado khayaanada bangiga
Sirdoonka macmalka ah ayaa maamusha inuu bini aadamka ku garaaco ciyaar fiidiyoow ah
Jaamacaddii ugu horreysay ee sirdoonka farsamada gacanta laga furi doono 2020